Testosterone phenylpropionate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
An analytical reference standard inorongwa se an anabolic androgenic steroid, Testosterone phenylpropionate Powder is an analytical reference standard inorongwa sean analic androgenic steroid. Ichi chigadzirwa chinogadzirirwa kutsvakurudza uye mapurisa ekuongorora.
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8) vhidhiyo
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8) Tsananguro
Raw Testosterone phenylpropionate poda yakagadzirwa anabolic-androgenic steroid (AAS) uye androgen ester - chaizvo, iyo C17β phenylpropionate ester ye testosterone - iyo yaimbove yakatengeswa muRomania.
Iyi mishonga inoshandiswa mune varume vasingatori zvakakwana zvezvinhu zvakasikwa zvinonzi testosterone. Muvarume, testosterone inokonzera mabasa akawanda anowanzoitwa, kusanganisira kukura uye kukura kwezvikadzi, masimba, uye mapfupa. Inobatsirawo kukonzera kukurudzirwa kwepabonde kwakakwana (kuyaruka) kuvakomana. Testosterone ndeyeboka rezvinodhaka rinozivikanwa se androgens. Inoshanda kuburikidza nehutano hwemitambo miviri kuitira kuti muviri unogona kukura nekushanda zvakanaka.
Testosterone inogonawo kushandiswa mune vamwe vakomana vechidiki kuti vakonzere ucheche kune avo vane nguva yekupera. Inogona kushandiswawo kubata mamwe maitiro echepamu rehadzi muvakadzi.
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8) Specifications
Product Name Raw Testosterone phenylpropionate poda
Kemikari Name Retandrol; Testosterone 17-phenylpropionate; Testosterone hydrocinnamate; Testosterone phenpropionate
muchiso Name Testolent
Molecular Wsere 420.593 g / mol
Kunyorera Point 115-116 ° C
kunyoresa An Androgen, kuvaka muviri
Chii chinonzi Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8)?
Testosterone phenylpropionate powder ndechimwe chezvinhu zvinoshandiswa zvakagadziriswa zvinosanganiswa-mishonga Sustanon, inosanganisira testosterone inonzi testosterone (testosterone phenylpropionate, testosterone propionate, testosterone isocaproate uye testosterone decanoate) uye yakagadzirirwa kupa rusununguko rwakasununguka rwezvinodhaka muropa uye yakagadzikana serumoni testosterone mazinga. Izvi zvinosanganiswa nemishonga zvinoshandiswa kuti testosterone replacement therapy muvarume nemamiriro ezvinhu anokonzerwa nehana yepakutanga uye yechipiri ye hypogonadism, ingave yakakura kana kuti inowanikwa uye inogona kushandiswa sechirwere chekubatsira kwevakadzikadzi nevarume vanoita zvechinyakare.
How Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8)
Testosterone Phenylpropionate powder ndiyo inokurumidza kubudiswa fomu ye testosterone, inokonzera kuwanda kwemahomoni anokwidziridzwa nevashandi vemuviri kukurumidza kukura musimba uye simba, asi kunetseka ndechokuti kutsvaira kwemisumbu kunopera mukati memavhiki mashomanana mushure mokunge mishonga ichigumburwa.
Mushure mekutora Testosterone Phenylpropionate, inogona kushandurwa kune yese isrogen uye Dihydrotestosterone (DHT). Testosterone Phenylpropionate inowedzera migumisiro yayo kuburikidza nekukurudzira kuwedzerwa kwe nitrogen kuchengetedza mumusumbu. Testosterone Phenylpropionate inokurudzirawo zvidimbu zvekukura kweGF-1 mumatumbu echisimba uye chiropa. Uyezve, inewo simba rekusimudza basa remasereti echipateri anowanzoita basa rinokosha mukugadzirisa hutachiona hwakakanganiswa.
Testosterone Phenylpropionate inosungira kune androgen receptor (AR) uye inotanga kuchinjwa kwemuviri kutakura shoko rayo. Androgen receptor (AR) kukurudzira kunokurudzira nzira dzakasiyana-siyana dzeA AR dzinosangana nematambudziko ekuwedzera kwemafupa pamwe nekurasikirwa kwemafuta. Testosterone Phenylpropionate inoderedzawo maitiro evanhu vane glucocorticoid hormone uye inowedzera sero red red production.
Apo Testosterone Phenylpropionate inoshanduka ku estrogen, inokonzera mhando dzakawanda dzemigumisiro dzinosanganisira gynocomastia, kuchengetwa kwemvura, asi DHT inowanzomisa kusuruvara kwebvudzi, kuora mwoyo uye prostate kuwedzera. Mari yeTesttosterone Phenylpropionate yakaderera nekuda kwekudzoka kwayo kwemazuva mashoma pamusika wakasviba, uye kuwanikwa kwakanyanya. Testosterone Phenylpropionate iri kukura zvikuru inowanikwa mumazuva anotevera.
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8) Dosi
Vakawanda vekugadzira muviri / vatambi vaitungamirira testosterone phenyl propionate kaviri pavhiki kana mamwe mazuva maviri mamwe mazuva. Nhamba inofadza yevarume ndeye 300mg- 3000mg / vhiki. Mitambo yemasikati haafaniri kukurudzirwa kushandisa iyi zvinodhaka nekuda kwemigumisiro inogona kuitika.
Mimwe migumisiro ye testosterone phenyl propionate inopfuura zvese testosterone esters, heano mamwe acho: virilization, kuwedzera bvudzi / bvudzi bvudzi.
Raw Testosterone phenylpropionate poda (1255-49-8) zvinobatsira
Testosteronephenyl propionate powder chirwere chinonzi kirasi ye androgens yemishonga. Icho chimwe chezvinhu zveSustanon uye Omnadren. Testosterone phenyl propionate powder inowanikwa kuhutungamiri sejairo. Injoyo ine hupenyu hunoshanda hwemazuva mana kusvika mashanu. Inogona kushandiswa iri yoga kana inosanganiswa nedzimwe nhengo dze androgen dzinoshandiswa pakurapa muvarume nechisimba che testosterone. Zvisinei, kushandiswa kwaro kunonyanya kuzivikanwa ndekuwedzera muscular masimba uye simba.Chiratidzo chakanaka chokuti vashandi vemuviri vanofanira kuziva pamusoro pezvinhu izvi ndezvokuti migumisiro yakadai sokuchengetwa kwemvura kunowanzoonekwa kakawanda. Uyewo nokutora testosterone phenylpropionate vatambi vanoridza kuwedzera kwechido, kurwisana uye simba. Kazhinji kuburikidza nekushandisa rudzi urwu rwe testosterone nenzira yakarurama migumisiro yakafanana nedzimwewo testosterone ester asi haifaniri kutora nguva yakawanda injenji, uye haibvumiri kuchengetedza mvura.
Zvose zvinoshandiswa nemishonga iri kukurudzira hupenyu kuburikidza nekuwedzerwa libido, hutachiona, simba, kuwedzera musimba mashoma nekuwedzera kurasikirwa kwemafuta. Hazvikurudzirwi kushandisa masero akawanda e testosterone phenyl propionate nemhaka yepamusoro uyerogenic zvinokonzerwa nemishonga. The androgenic / anabolic zvinokonzerwa nemishonga inoenderana nehutachiwana. Vatambi vanofunga kuti kukwirira kwayo, kunowedzera mhinduro, asi kuwedzera kwemasero kunoreva dambudziko rakakura rinosanganiswa nemigumisiro yakaipa pachiropa. Testosterone phenyl propionate inofungidzirwa kuti inounza migumisiro yakawanda pakuwedzera maitiro e testosterone, kuwana simba uye musimba mashoma. Nokuda kwekusimudzirwa kweAndrogen Receptors, testosterone phenyl propionate powder inogona kukonzera kukurumidza musimba mashoma, kuwedzera kurasikirwa kwemafuta, kushandiswa kwemaviri nekukura. Sezvo muviri unowedzera musimba wayo mukukura kwekukurumidza, zvimwe zvokudya zvinogadzirwa zvinosungirirwa zvakananga kumasumbu emasumbu. Icho chiitiko chisina kujeka che testosterone pane kurasikirwa kwemafuta.
Tenga Testosterone phenylpropionate poda kubva kuBuasas.com